Telefoonnada ugu fiican ee nadiifiya hawo -mareenkaaga | Ee kalluunka
Siphon aquarium -ku waa qalab kale oo aasaasi u ah inuu awood u yeesho fulinta dayactirka quraaraddayada oo sidaas ku ilaali nadaafadda iyo kalluunkayaga oo faraxsan oo caafimaad qaba. Sifoner -ka waxaan ku baabi'in doonaa wasakhda ku urursan xagga hoose waxaanan ka faa'iideysan doonnaa inaan cusboonaysiino biyaha ku jira quraaradda.
Maqaalkan waxaan kaga hadli doonaa waxa waa maxay siphoner, noocyada kala duwan ee aan ka heli karno, sida loo nuugo aquarium -ka oo xataa waxaan ku bari doonaa sida loo dhiso siphon -ka gurigaaga lagu sameeyo. Intaa waxaa dheer, waxaan sidoo kale kugula talineynaa inaad akhrido maqaalkan kale ee ku saabsan waa maxay biyaha loo isticmaalo aquariums-ka haddii ay tahay markii ugu horraysay ee aad samaysato.
1 Waa maxay siphon aquarium
2 Waa maxay faa'iidooyinka ku -dhufashada quraaradda?
3 Noocyada siphoner ee quraaradda
3.3 Kaliya nuug wasakhda
4 Sida loo isticmaalo siphon -ka quraaradda
5 Sida loo nuugo biyo -biyoodka la beeray
6 Halkee laga iibsan karaa siifon quraaradda
Waa maxay siphon aquarium
Nadiifiyeyaasha Barkadaha BPS® ...
Luigi's Aquarium Siphon ...
Siphoner aquarium -ka, oo sidoo kale loo yaqaan siphon, waa aalad aad waxtar u leh oo noo oggolaanaysa inaan ka tagno sagxadda biyo -mareenkeenna sida diyaaradaha dahabka ah, maadaama wuxuu nuugaa wasakhda ku urursantay jayga hoose.
In kasta oo ay jiraan dhawr nooc oo kala duwan oo ah siphoners (sida aan kaga hadli doonno qayb dambe), dhammaantood si isku mid ah ayay u shaqeeyaan, maadaama waxay la mid yihiin nuujiyaha faaruqinta oo liqa biyaha, oo ay weheliso wasakh urursan, si loogu tago weel gooni ah. Iyada oo ku xidhan nooca, xoogga wax nuugista waxaa lagu fuliyaa koronto ahaan ama gacanta, tusaale ahaan, waxaa mahad leh qalab nuugid oo u oggolaanaya in biyaha wasakhda ahi ay ku dhacaan weel gooni ah iyo iyada oo loo marayo siphon -ka mahadnaqa cufnaanta.
Waa maxay faa'iidooyinka ku -dhufashada quraaradda?
Waa hagaag, ujeedka laga leexinayo quraaradda quraanka ma aha mid kale nadiifi, ka saar haraadiga cuntada iyo saxarka kalluunka ee ku urura salka hoose ee quraaradda. Si kastaba ha noqotee, dib u soo noqoshada, siphon -ka ayaa sidoo kale noo oggolaanaya inaan:
Ka faaideyso beddel biyaha quraaradda (oo kan wasakhda ah ku beddel midka nadiifta ah)
Iska ilaali biyaha cagaaran (sababta oo ah algae ka dhalan kara wasakhda, oo siphonku mas'uul ka yahay baabi'inta)
Ka ilaali kalluunkaaga inuu xanuunsado sababtoo ah biyo aad u wasakhaysan
Noocyada siphoner ee quraaradda
hay laba nooc oo waaweyn oo sifoner ah oo loogu talagalay quraaradda, korontada iyo buugga, inkasta oo kuwan dhexdooda ay ku jiraan qaar leh astaamo aad u xiiso badan, kuwaas oo la waafajin kara baahiyahaaga.
Siphon yar waxay ku habboon yihiin aquariums -yada yaryar. In kasta oo ay jiraan kuwo koronto ah, iyagoo yaryar haddana waxay u muuqdaan inay yihiin kuwo aad u fudud oo si fudud uga kooban nooc ka mid ah gambaleelka ama tubbada adag, kaas oo ay biyaha wasakhda ahi soo galaan, tuubbo jilicsan iyo badhanka dambe ama badhanka oo ay tahay inaan cadaadino si aan u awoodno in la nuugo Biyaha.
NICREW 3 ee 1 Nadiifiyaha Vacuum ...
Shaki la'aan kan ugu waxtarka badan, waxay leeyihiin qaliin la mid ah kuwa siphoners -yada yaryar (af adag oo ay biyuhu ka soo galaan, tuubbo jilicsan oo ay ku safraan iyo badhanka nuugista, iyo sidoo kale matoor yar, dabcan), laakiin waxay ku kala duwan yihiin inay ka awood badan yihiin. Qaarkood xitaa waxay u eg yihiin qoriga ama waxaa ku jira bacaha nooca vacuum-ka ah si loogu kaydiyo wasakhda. Waxa wanaagsan ee ku saabsan siphon -kan ayaa ah, in kasta oo ay xoogaa ka qaalisan yihiin kuwa gacanta, haddana waxay noo oggolaadaan inaan gaarno meelaha fog fog ee quraaradda iyada oo aan wax dadaal ah la samayn.
Ugu dambayn, gudaha foornooyinka korontada waxaad ka heli doontaa si buuxda koronto (yacni, waxay ku xiran yihiin hadda) ama baytariyada.
Kaliya nuug wasakhda
bdee 6 ee 1 Nadiifiye ...
Nooc kale oo siphon aquarium ah oo aan ka heli karno dukaamada waa kan nuugaan wasakh laakiin ma biyo. Qalabku wuxuu la mid yahay kan intiisa kale, iyada oo ay ku kala duwan yihiin inay leedahay shaandho ay wasakhdu ka gudubto si ay ugu kaydiso bac ama taangiga, laakiin biyaha, oo horeba u yara nadiifsanaa, ayaa dib loogu soo celiyay quraaradda. Si kastaba ha noqotee, tani maahan moodel aad loogu taliyay mustaqbalka fog, maadaama nimcada siphon ay tahay inay noo oggolaaneyso inaan ku dilno laba shimbirood hal dhagax, nadiifinno hoose ee quraaradda oo aan biyaha si fudud u beddelno.
Waxaa jira fursado badan oo aad ku samaysan kartid siphon -ka gurigaaga, laakiin halkan waxaan ku tusi doonaa moodeel jaban oo ka fudud. Waxaad u baahan doontaa oo kaliya xabbad tuubbo ah iyo dhalo caag ah!
Marka hore, hel walxaha ka kooban siphon -ka: gabal tuubbo hufan, ma aha mid aad u qaro weyn ama adag. Waxaad ka heli kartaa dukaamo khaas ah, sida dukaan kasta oo qalabka lagu sameeyo. Waxaad sidoo kale u baahan doontaa a dhalo yar oo biyo ah ama soodh (qiyaastii 250 ml ayaa fiican).
Tuubada jar si loo cabbiro. Ma aha inay aad u dheeraato ama aad u gaaban tahay. Si loo cabbiro, waxaan ku talineynaa in la dhigo baaldi (oo ah meesha biyaha wasakhda ahi ku dhammaan doonaan) meel hoose oo ka mid ah quraaradda. Ka dibna tuubada ku rid quraaradda: qiyaasta ugu fiican ayaa ah inaad ku dhejin karto sagxadda quraaradda oo aad ka saarto si uu u gaaro baaldi dhibaato la'aan.
Dhalada jar. Iyada oo ku xidhan baaxadda quraaradda, waxaad ka jari kartaa sare ama hoose (tusaale ahaan, xagga dhexe haddii ay tahay quraaradda weyn, ama ka hooseysa calaamadda haddii ay tahay quraaradda yar).
Qabasho daboolka dhalada oo dalool si aad ugu ridi karto tuubada caagga ah laakiin aad weli xajisato. Waa tallaabada ugu dhib badan in la fuliyo, maadaama bacda daboolka ay ka adag tahay inta kale oo ay adag tahay in la dalooliyo, markaa ka taxaddar inaadan naftaada dhaawacin.
Tuubada geli daloolka daboolka oo u isticmaal si aad dhalada qoorta ugu xirto. Waa diyaar!
Si ay u shaqeyso, dhig qeybta dhalada siphon -ka hoose ee quraaradda. Ka saar dhammaan goobooyinka. Baaldigu u diyaari in biyaha wasakhda ahi galaan. Marka xigta, nuug dhammaadka bilaashka ah ee tuubada ilaa xoogga cufku sababayo in biyuhu ku dhacaan baaldiga (ka taxaddar liqidda biyaha wasakhda ah, caafimaad ma laha haba yaraatee, sidoo kale aad bay u xun tahay).
Ugu dambayn, isticmaal siphon -ka aad isticmaasho, aad uga taxaddar inaadan ka saarin wax ka badan 30% biyaha quraaradda marka aad nadiifinayso, maadaama kalluunkaagu xannuunsan karo.
Sida loo isticmaalo siphon -ka quraaradda
Isticmaalka siphon -ka, dhab ahaantii, waa mid aad u fudud, laakiin waa inaan ka taxadarnaa inaanay nagu culeysin hoyga kalluunkayaga.
Marka hore, diyaarso qalabka aad u baahan doonto: sifoonka iyo, haddii ay dhacdo inay tahay moodel u baahan, a baaldi ama baaquli. Tani waa in la dhigaa meel ka hooseysa quraaradda si cuf -cufku u qabto hawshiisa.
Bilow inaad si taxaddar leh u faaruqiso. Waxaa ugu wanaagsan in laga bilaabo meesha ugu wasakhda badan ay ku uruurtay. Sidoo kale, waa inaad isku daydaa inaadan quruuruxa dhulka ka qaadin ama aadan wax qodin, ama deegaanka kalluunkaaga ayaa saamayn kara.
Waxa kale oo muhiim ah, sidaan hore u sheegnay, ha qaadan biyo ka badan biilka. Ugu badnaan 30%, maadaama boqolkiiba ka badan ay saamayn karto kalluunkaaga. Markaad dhammaystirto cabbitaanka, waa inaad biyaha wasakhda ah ku beddeshaa mid nadiif ah, laakiin xusuusnow inay tahay in tan loola dhaqmo si la mid ah tii ka hadhay quraaradda oo ay yeelato heerkul isku mid ah.
Ugu dambayn, in kasta oo ay wax badan ku xirnaan doonto cabbirka aquarium -kaaga, hannaanka kala -qaadista waa in la sameeyaa xilliba mar. Ugu yaraan bishiiba mar, iyo ilaa toddobaadkii hal mar haddii loo baahdo.
Sida loo nuugo biyo -biyoodka la beeray
Kayd -biyoodyada la beeray waxay mudan yihiin qayb gaar ah oo loo adeegsado siphon -ka quraaradda, tan iyo aad bay u jilicsan yihiin. Si aanad u hormarin hoyga kalluunkaaga, waxaan ku talinaynaa kuwan soo socda:
Dooro a siphoner koronto, laakiin leh awood yar, iyo irid yar. Haddii kale, waxaad aad u faaruqin kartaa oo qodi kartaa dhirta, oo aan rabno inaan iska ilaalino kharash kasta.
Markaad bilowdo nuugista, aad uga taxaddar inaad xididdada ha qodin ama waxyeeleeyo dhirta. Haddii aad haysato siphon leh marin yar, sidaan sheegnay, waxaad awoodi doontaa inaad xakameyso tallaabadan si ka sii wanaagsan.
Diirad saar gaar ahaan meelaha qashinku ku urursan yahay iyo saxarka kalluunka.
Ugu dambeyntii, dhirta ugu jilicsan ee siphon -ku waa kuwa dhulka ku safan. Si aad iyo aad ah u samee si aadan u qodin.
Halkee laga iibsan karaa siifon quraaradda
hay meelo badan oo aad ka iibsan karto siphonerHaa, waxay u muuqdaan kuwo takhasus leh (ha filan inaad ka hesho dukaanka raashinka ee magaaladaada). Kuwa ugu badan waa:
Amazon, boqorka bakhaarrada, wuxuu leeyahay gabi ahaanba dhammaan moodooyinkii jiray iyo in la haysto. Haddii ay yihiin kuwo fudud, buug-gacmeed, koronto, batari ku shaqeeya, awood badan ama ka yar… Waxaa aad loogu talinayaa in, marka lagu daro sharraxaadda alaabta, aad eegto faallooyinka si aad u aragto sida loogu waafajin karo baahiyahaaga ku saleysan waayo -aragnimada dadka kale.
En dukaamada xayawaanka ee gaarka ahSida Kiwoko, waxaad sidoo kale heli doontaa dhowr nooc. In kasta oo laga yaabo inaysan lahayn kala duwanaansho badan sida Amazon oo ay xoogaa ka qaalisan yihiin xaaladaha qaarkood, waxa wanaagsan ee ku saabsan bakhaarradan ayaa ah inaad qof ahaan aado oo aad talo weydiisato khabiir, wax gaar ahaan lagu taliyay markii aad hadda adduunka xiisaha leh ee kalluunka.
Siphon aquarium -ku waa aalad aasaasi ah oo lagu nadiifiyo quraaradda oo kalluunkaaga laga dhigo mid dib -u -soo -noqda, caafimaad iyo farxad leh. Waxaan rajeyneynaa inaan kaa caawinnay inaad fahanto sida ay u shaqeyso oo aan kuugu fududeyno doorashada siphon -ka adiga iyo aquarium -kaaga kuugu habboon. Noo sheeg, waligaa ma isticmaashay qalabkan? Siday wax u dhaceen? Ma ku talinaysaa nooc gaar ah?
Wadada buuxda ee maqaalka: Kalluunka » Gargaarka » Siphoner Aquarium
Qaboojiyaha biyaha Aquarium